R & D Xoogga - Shenzhen Roman Technology Co., Ltd.
Xoog R&D Awood leh
Madaxweyne ku xigeenka Tignoolajiyada Roomaanka Wang Xianbing waxa uu u shaqeeyaa sidii agaasimaha waaxda R&D.Isagu, Master ka ah Jaamacadda Teknolojiyadda ee Koonfurta Shiinaha, wuxuu u heellan yahay farsamada R&D ee Bluetooth muddo 25 sano ah.
Waaxda R&D waxay ka kooban tahay 11 shaqaale xudun u ah oo ka socda shirkadaha caanka ah ee adduunka sida Hutchison Harbor Ring.China State Construction Engineering Corporaton.iyo Shenzhen Guowei Cesller Technology.Waxay u heellan yihiin R&D celcelis ahaan 16 sano.
Guulaha R&D: 236 patents asaasiga ah.Roman waxa uu ku guuleystey homorytitl ee "shirkadda hi-teknoolojiyadda qaranka" ee 2014 waxaana la qoray "Shenzhen's Top 100 Innovation Innovation Medium and Small Enterprises" 2015.
Kooxda nashqadeeyaha Roman waxay ka kooban yihiin 70-meeyadii ka dib kuwaas oo ku guuleystay abaal-marinaha naqshadeynta gudaha Shiinaha iyo dibeddiisa,8Os ka dib oo leh fikrado gaar ah.iyo 90-meeyadii oo leh fikrado cusub oo badan. Iyada oo duug ah, da 'dhexe, iyo naqshadeeyayaasha da'da yar, Roman waxa ay dhistaa kooxda naqshadaynta hormuudka ah ee warshadaha maqalka wireless-ka ee Shiinaha.
Kooxda naqshadaynta Roman waxay soo martay toban sano oo ku-dhaqan iyo daraasado ah, ma aha oo kaliya naqshado.
Diirada saarista khibrada adeegsadaha, waxay ku daraan wax cusub iyo hal-abuurnimada alaabada.Waxay ku fiican yihiin horumarinta alaabada iyo beddelka badeecadaha caadiga ah una beddelaan kuwa caadiga ah.
Waxay ku fiican yihiin maaraynta silsiladda sahayda maqalka ee bilaa-waayirka ah.Iyagoo og shuruudaha macaamiisha, waxay si sax ah u go'aamin karaan meelaynta alaabta iyo shuruudaha macaamiisha.
Waxay u qabteen in ka badan 1000 mashruuc naqshadeyn ah iyo in ka badan 200 adeegyada naqshadeynta ODM/OEM ee shirkadda
Bluetooth Mono Headset, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha,